ပြောင်း ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ (AUD) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ (AUD)
ပွောငျး ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ (AUD)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ (AUD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.774ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ယူရိုEUR€0.643ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.557ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.709ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr6.45ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.78ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč16.61ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.93ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.968
ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$15.44ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$6.01ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$4.31ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹58.11ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.118.68ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.03ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.08ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿24.28ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥5.03ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥83.66ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩864.98ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦295.25ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽59.02ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴21.69
ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ BitcoinBTC0.00001 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ EthereumETH0.000385 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ LitecoinLTC0.00347 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ DigitalCashDASH0.00299 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ MoneroXMR0.00294 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ NxtNXT12.72 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ Ethereum ClassicETC0.0402 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ DogecoinDOGE12.88 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ZCashZEC0.00447 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ BitsharesBTS6.74 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ DigiByteDGB9.68 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ RippleXRP0.827 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ BitcoinDarkBTCD2561261.56 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ PeerCoinPPC0.793 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ CraigsCoinCRAIG33862978357.36 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ BitstakeXBS0.312 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ PayCoinXPY309.77 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ ProsperCoinPRC77443017.43 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ YbCoinYBC0.00043 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ DarkKushDANK23829503288.52 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ GiveCoinGIVE160849147197.49 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ KoboCoinKOBO59.65 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ DarkTokenDT0.713 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD သို့ CETUS CoinCETI10723276479.84
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 11:15:02 +0000.